Baolina kitra - CAN 2021 :: Misokatra amin’ny rehetra ny fampivondronan’ny Barea • AoRaha
Efa eto an-toerana avokoa ny ankamaroan’ireo mpila­lao mpila ravinahitra man­­drafitra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra na ny Barea. Tafiditra ao anatin’ ny fano­ma­nana ny lalao voalohany amin’i Etiopia mandritra ny dingana fifa­nintsanana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika 2021.
Nanamafy i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly, fa amin’ny 4 ora hariva ny Barea no hanao ny fanazarantena eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina
“Manomboka ny fampi­vondronana azy ireo ao amin’ ny trano fandriambahiny “Le louvre”. Rahampitso kosa no hiakatra kianja izy ireo ary azon’ireo mpijery tsy anka­navaka atrehina. Mbola hilaza vaovao misimisy ireo mpikam­bana avy ao amin’ny FMF mikasika an’io fampi­vondronana io rahampitso (ndlr: anio)”, hoy kosa Razafimamonjy Jocelyn, filohan’ny vaomieran’ny serasera ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Nigadona an-tanindra­zana voalohany, tamin’ny zoma lasa teo, i Romain Métanire. Nanaraka azy ry Dimitry Caloin, Voavy Paulin , Lalaina Nomen­janahary (Bolida) , Thomas Fontaine, Jérôme Mombris ary Melvin Adrien, tamin’iny faran’ny herinandro iny. Efa vonona hiatrika ny fampivondronana ihany koa ireo mpilalao avy eto an-toerana. Omaly indray no tonga Andriatsima Faneva, kapi­tenin’ny Barea niatrika ny CAN 2019. Nanaitra an’ireo mpanaraka ny taranja ny fanambaràna nataony, tamin’ ny faran’ny herinandro teo. Nilaza ity mpilalao ity fa hijanona tanteraka amin’ny fiarovana ny voninahi-pirenena ao anatin’ny ekipam-pirenena. Io lalao amin’i Etiopia io, hoy izy, tao anatin’ny fanambaràny, no hilalaovany farany miaraka amin’ny Barea.
Manomboka amin’ny 6 ora maraina ny fanoma­nan-tena hataon’ireo mpilalao ka hatramin’ny 5 ora hariva. Manao ny fanatanjahantena anaty efitra na “salle de sport” izy ireo, hoy hatrany iry tompon’andraikitra ao amin’ny Fmf iry, sady manao ny “kiné” mandra-piandry an’ireo namany sasany izay ho avy anio.
Fibatana fonjamby – Afrika :: Hiady tapakila amin’ny Lalao Olympika ireo atleta malagasy dimy
Basket-ball amboaran’I Afrika :: Hody tsy misy medaly ireo mpilalao malagasy